जापानको सर्वश्रेष्ठ समुराई संग्रहालय। क्योटो र ओसाकामा सामुराई र निन्जा संग्रहालय - Samurai Ninja Museum
जापानको सर्वश्रेष्ठ समुराई संग्रहालय। क्योटो र ओसाकामा सामुराई र निन्जा संग्रहालय
यदि तपाईं जापानमा एक समुराई संग्रहालय भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ भने यो सर्वोत्तम एक !!!
समुराई र निंजा संग्रहालय5ईर देखि थाहा हुन्छ: ह्यानियन अवधि, कामकुरा अवधि, मुरोमाची अवधि, ईडो अवधि र मेजी अवधि। आगन्तुकहरूले एक समुराई कपाल लुगा लगाउन सक्छन्, दर्शकहरूले पनि साँचो समुराई तल पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यहाँ एक समुराई प्रदर्शनी, निन्जा, सामुराई तलवार शो र एक सूवा कुश्ती शो छ। एउटै भवनमा यो जापानको चाय समारोह अनुभव गर्न सम्भव छ। समुराई संग्रहालयको स्थान क्योटो सिटीको बीचमा छ। ओसाका शाखा डटोंबोबी भन्दा टाढा छैन।
समुराई र निंजा संग्रहालय मध्यकालीन समयबाट रोचक कलाकृतिहरू थिए। अतिथिहरू भ्रमण गाइडको सहयोगमा संग्रहालयको आनन्द उठाउन सक्छन्। त्यहाँ धेरै रमाइलो समुराई ब्याकड्रपहरू चित्र र एक समुराई र निंजा उपहार पसल पनि छन्। संग्रहालय 10 देखि7बजे सम्म खुला छ। तपाईं यस वेबसाइटमा टिकट किन्न सक्नुहुन्छ।
ह्यानियन अवधि (794-1185)
समुराई अवधि “ह्यानियन अवधि” मा सुरु भयो। टेरा क्यानन र मिनामोटो क्लानले सम्राटलाई सुरक्षित गर्यो। तथापि, तिनीहरूले एकअर्कालाई अलिअगाडि लड्न थाले। जेनेपे युद्धपछि, मिनिमोटो क्लानले जापानलाई शासन गर्न थाले। सम्राटलाई कुनै शक्ति थिएन।
मिनमोटो क्लैन कामकुरामा सारियो। तिनीहरूले एक सैन्य सरकार स्थापना गरे र नेता “शोगुन” भनिन्थ्यो। बुद्ध धर्म धेरै लोकप्रिय भए। 1274 मा, कुबिलाइ खान र मङ्गोलियनले जापानलाई आक्रमण गरे। तिनीहरू समुराईले पराजित गरे। मङ्गोलियनले फेरि 1281 मा आक्रमण गरे र समुराईले तिनीहरूलाई फेरि पराजित गर्यो। दुवै आक्रमणहरूमा त्यहाँ बलियो हावाहरू थिए। धार्मिक मानिसहरूले हवाइहरूलाई “कामीकेज” भनिन्।
मुरोमाची अवधि (1336 ~ 1573)
मङ्गोल आक्रमणहरूमा 50 वर्ष पछि, केही क्लैंपहरू सम्राट फिर्ता चाहन्थे। त्यहाँ एक विद्रोह थियो तर यो अपमानजनक थियो। राजधानी क्योटोमा फर्कियो। नयाँ युग सुरु भयो। गोल्डन महल र Ryoanji मंदिर यस युगको समयमा निर्माण गरिएको थियो। 1467 मा, शोगुनले देशमा लिनको लागी कुनै छोरा थिएन। धेरै “दाई “ले एकअर्का विरुद्ध लड्न थाले। देश अराजकतामा थियो। त्यहाँ दर्जनौं साना राज्यहरू एकअर्कालाई फेरि युद्धमा थिए। नयाँ युगलाई “सेंग्को अवधि” भनिन्छ।
Azuchi Momoyama अवधि (1573 ~ 1603)
ओडा नोब्युगा जो एक निर्दोष योद्धा थियो अन्ततः जापानलाई एकताबद्ध गर्न सफल भयो। उनले 1573 मा क्योटोको विरोध गरे र यो नयाँ युगको सुरुवात हो। उहाँ आफ्नो नजिकको जनरल द्वारा 1582 मा हनुनी मंदिरमा मारेका थिए। हन्नाओ मंदिर क्योटोमा सामुराई र निन्जा संग्रहालय पछि ठीक छ। जापानको क्यान्सरका बीचमा केही असहमतिहरू थिए। 1600 मा, जापानको पूर्वी पक्ष र जापानको पश्चिम पक्षका क्यान्सर एकअर्का विरुद्ध लडाइँ गरे। यो जापानको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो युद्ध थियो: सेक्सीगुरा युद्ध। टोकुगावा इआयोउको पूर्वी सेना जीता।
टोकुगावाको राजधानी टोकियोमा सारियो। टोकियो एशियाको सबैभन्दा ठूलो शहर हो। त्यहाँ एक सख्त व्यवस्थापन प्रणाली थियो। कोइन जापान प्रवेश गर्न सकेन र जापानले छोडेनन्। सम्राटलाई सम्मान गरिएको थियो तर शोगुन देशको वास्तविक शासक हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ 100 भन्दा धेरै डमीयो जसले शोगुनमा कर तिर्नु भयो। प्रत्येक दामा सैकड़ों समुराई योद्धा थिए। किसानहरुले सबै चावललाई दाईयो लाई दिए। ईडो अवधिको समयमा जापानको90% टोकियोमा पढ्न र लेख्न सक्थे।
– सामुराईले “गुरुलाई सेवा गर्दछ”। यद्यपि समुराई योद्धाहरू हुन्, शब्दको अर्थ योद्धा होइन। योद्धाको लागि जापानी शब्द “सेन्सि।”
– समुराईका केटाहरूलाई वास्तविक सामूर तलवारहरू दिइएको थियो जब उनीहरू केवल5वर्षको थिए।
– केवल समुराईले2स्वर्गीयहरू मात्र गर्न सक्दछ।
– केवल समुराई अन्तिम नाम हुन सक्छ।
– केवल समुराईले घोडाको स्वामित्व लिन सक्छ।
– केवल समुराईले हराकरी गर्न सक्छ।
– केवल एक सामुराई परिवारको सदस्य एक समुराई हुन सक्छ।
– केवल समुराई र भिक्षुहरु लाई जीन बागानहरुमा प्रवेश गर्न को लागी अनुमति दिइएको थियो।
– केवल समुराईले भारी भट्टीको सामना गर्यो।
– सामुराईलाई कुनै पनि अन्य कार्यको अनुमति छैन।
– सामुराई, कविता, फूल व्यवस्था र साहित्यमा राम्रो थिए।
– समुराईमा “wabi-sabi” जीवन शैली थियो: साधारण र पुरानो चीजहरू सुन्दर र सुन्दर छन्।
– एक समुराईको औसत वेतन एक वर्ष3टन चावल थियो।
– निन्जा शब्द को अर्थ भनेको “कठिनाइहरू सहन सक्ने” हो।
जापानमा निन्जालाई “शिनोबी” भनिन्थ्यो।
जापानमा2वटा निन्जा क्ल्यानहरू थिएः इग कलक र कोका क्यानन।
– निन्जा किसानहरू थिए। उनीहरूको विशेषाधिकार थिएन जस्तै समुरै।
– निन्जाले कालो पोशाक लुगा लगाएनन्। तिनीहरूको संगठन गहिरो निलो वा सजिलो रंग थियो।
– निन्जा को 60 किलो भन्दा बढी हुनु हुँदैन।
– निन्जा दौडिरहेको बेला धेरै राम्रो थिए। यो रिपोर्ट गरिएको छ कि केहि निन्जा एक दिन 200 किलोमिटर भाग्न सक्दछ।
– निन्जाहरू जासूसको रूपमा विचार गर्न सकिन्छ। तिनीहरू योद्धाहरू होइनन्।
तपाईं हाम्रो संग्रहालयमा सामुराई र निजाजाको बारेमा बढी जान्न सक्नुहुन्छ। हामी हरेक दिन खुला छौं।
Categoriesसामुराई र निन्जा (Nepali) Tagsक्योटो, चीजहरू जापानमा, टोकियो, निज संग्रहालय, बशिडो, बसही, शिनोबी, समुराई अर्थ, समुराई इतिहास, समुराई योद्धाहरू, समुराई संग्रहालय, समुराईका तथ्याङ्क, साम्राज्यवादी छन्।
Previous PostPrevious ဂျပန်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆာမူရိုင်းပြတိုက်။ ကျိုတိုနှင့်အိုဆာကာအတွက်ဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ပြတိုက်
Next PostNext Japans beste samurai museum. Samurai og Ninja Museum i Kyoto og Osaka